Banyere Anyị - Xuzhou Xinqihang Plastic Industry Co., Ltd.
Companylọ ọrụ ahụ dị na Mpaghara Industrialta Ahụhụ nke Qing'an, Xuzhou City, Jiangsu Province, nwere isi obodo edebanyere nde yuan 45 na mpaghara ihe owuwu karịrị 70,000 square mita. E nwere ihe karịrị 100 ọrụ, 8 ọkachamara na oru pesonel, na 2 injinia. Companylọ ọrụ ahụ nwere Buttonfield na Shanghai Jingwei E nwere ihe karịrị 20 mmepụta mmepụta (DN20mm-DN1400mm) dịka Ningbo Fangli, na ikike mmepụta kwa afọ nke ọkpọkọ plastik karịrị tọn 30,000.
Ogo bụ Ndụ
Ogo bụ ndụ. Anyị na-emepewanye uru nke usoro ọkọnọ, na-ebuli usoro sistemụ, ma hụ na ogo na nkwụsi ike nke akụkụ ọkọnọ. Anyị na-emejuputa njikwa dabere wee nweta ọmarịcha asọmpi dị mma site na njikwa R&D na-agbanwe agbanwe, njikwa njikwa niile, yana arụmọrụ arụmọrụ. Companylọ ọrụ ahụ agafeela asambodo njikwa njikwa ISO90001, asambodo njikwa njikwa gburugburu ebe obibi ISO14001, asambodo njikwa gburugburu ebe obibi OHSAS18001, asambodo njikwa ọrụ nchekwa na nchekwa nchekwa, BV, SGS, ubi TUV na asambodo ngwaahịa, yana ngwaahịa ya agabigawo ISO4427, ASTM D3035, EN 12201, AS / NZS 4130 testingkpụrụ nyocha nke atọ nke mba ụwa.
Innovation bụ Mkpụrụ Obi
Innovation bu nkpuru obi nke oru. Dị ka ihe ọhụrụ ulo oru ụlọ ọrụ, anyị na-ezute ndị pụrụ iche mkpa nke ndị ahịa site na nkà na ụzụ nnyocha na ọhụrụ. Anyị nwere ụlọ ọrụ R&D dị elu na ụlọ nyocha, nke na-aga n'ihu na-eme nyocha na nyocha niile n'afọ, ma nwee ike ịnye ọrụ OEM ahaziri dịka mkpa pụrụ iche nke ndị ahịa na mpaghara dị iche iche, iji nye ndị ahịa nnukwu azịza. Site na arụmọrụ magburu onwe ya na njirimara akara nke ngwaahịa ndị a, ejirila ngwaahịa ndị a na-ebugharị na sistemụ njem ụgbọ mmiri na mpaghara nke ihe owuwu obodo, ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ kemịkalụ, mmanụ ala, ngwuputa, aquaculture, ụzọ ụgbọ njem, na iwu obodo, Emeghewo nke oma Na ahia mba uwa, a na ebupu ya karia obodo iri ato na mpaghara tinyere Bangladesh, Vietnam, Chile, Argentina, Czech Republic, Russia, UAE, Turkmenistan, Iran, na Sudan wee merie otu olu si na ndi oru!
The Core Njirimara nke Xinqihang Plastic Industry Pee Pipe
Elu-edu mmepụta ihe
Họrọ Sinopec ma webata ngwa ngwa dị elu, anyị kwenyesiri ike na ọ bụ naanị ezigbo akụrụngwa na nkà na ụzụ dị mma nwere ike ịmepụta ọkpọkọ dị elu.
Zuru okè mmepụta akụrụngwa
Na-ebute ụzọ na ịnakwere ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ụlọ, ma kwalite akụrụngwa ka ị bụrụ ụzọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Professional oru pesonel
A isi oru otu nke ihe karịrị mmadụ iri, na nkezi nke 10 afọ nke ụlọ ọrụ oru ahụmahụ.
Njikwa ogo zuru oke
Mbụ nnyocha nke ngwaọrụ, ịkpụzi àgwà nnyocha, echesinụ àgwà akara tupu nnyefe.
Usoro ntozu oke
Ekwenyela usoro a gwụchara ọtụtụ oge, ma gosipụta ogo nke ọtụtụ ogbe maka nyocha.
Ngwaahịa na ọrụ dị mma
Nye ọkachamara tupu ahịa, na-ahịa, na mgbe-sales ọrụ, na-enye free oru nkwado.
Anyị na-esi ọnwụ na "iguzosi ike n'ezi ihe management, àgwà mbụ, mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ, na-elekọta mmadụ ọrụ" dị ka isi ụkpụrụ nke enterprise, na ji obi ụtọ na-anabata anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ndị ahịa ileta na-eduzi anyị ụlọ ọrụ. Anyị ụlọ ọrụ ga-ezi obi na-akwado ndị enyi si n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ na imekọ ihe ọnụ echiche nke "elu-edu àgwà, elu-edu aha, elu-edu ọrụ" ike a mma n'ọdịnihu!